Fizarana ny fananana
Fizarana ny fananana, fantatra ihany koa amin’ny maha-drariny ny fitsinjarana, dia fizarana ara-pitsarana ny fananany zo sy adidy eo amin’ny mpivady nandritra ny fisaraham-panambadiana. Izany dia mety atao amin’ny alalan’ny fifanarahana, amin’ny alalan’ny fananana ponenana, na ara-pitsarana amin’ny alalan’ny didim-panjakana. Ny fizarana ny fananana dia ny fizarana, noho ny fahafatesana na ny fanafoanana ny fanambadiana, ny fananana izay nanana ny maty, na azony nandritra ny mazava ho azy fa ny fanambadiana. Any England pays de Galles, mpiara-miasa ao, na avy fanambadiana afaka manaiky ny fomba iraisana, ary niaraka mihazona ny fananana dia tsy azo zaraina raha tsy misy ny fidirana an-tsehatry ny fitsarana. Izay fifanarahana dia tsy afaka ny ho tonga, ny fitsarana dia mety ho nangataka mba hamaritana ara-drariny sy drariny ny fisarahana. Ny raharaha Miller v Miller nanome ny vadiny be mantsy ny vadiny vao haingana tombony vokatry ny fitondran ao an-Tanàna na dia ny fanambadiana dia niaina fohy. Ao ny zava-nitranga ny fisaraham-panambadiana, hany ara-panambadiana ny fananany dia ho raisina ho fananana fizarana ary afa-tsy ireo fananany dia ho raisina ho toy ny ara-panambadiana fananana izay efa azony nandritra ny mazava ho azy fa ny manokana ny fanambadiana. Toy izany ny lafin-javatra hafa dia mety ahitana mpivady an-trano, kaonty amin’ny banky, ny fampiasam-bola (ao anatin’izany ny renivola, ny fatorana sy ny fisotroan-dronono tahiry), ary na dia ny orinasa natsangana nandritra ny mazava ho azy fa ny fanambadiana ao amin’ny fanontaniana. Ao amin’ny firenena sasany (New York state) toerana, ny fanabeazana ambaratonga nahazo nandritra ny fanambadiana dia azo heverina ho ara-panambadiana fananana. Toy izany ny fanjakana, ny fanapahan-kevitra momba ny fisaraham-panambadiana dia matetika mitarika fandoavam-bola avy amin’ny manam-pahaizana vady ny hafa vady ny hizara ny andrasana ho avy ny vola izay tokony ho ny mari-pahaizana dia nahazo mandritra ny fisaraham-panambadiana sy ny mety mitaky ny fahaizana asa mpahay toe-karena na hafa antontan’isa sy ny ara-bola ny manam-pahaizana.
Ferguson, ny fitsarana voalaza drariny ny fitsinjarana ny mpivady fananana amin’ny fisaraham-panambadiana araka ny tsara tarehy, na ny drariny, noho ny manavaka ny fananana rafitra. Ny fitsarana dia mety hihevitra toy izany dia anton-javatra toy ny ‘mitana anjara amin’ny fanangonan-karena ny fananana, ny tsena sy ny fihetseham-po sarobidy ao amin’ny toe-bola, ny hetra sy ny hafa ara-toekarena vokatry ny fizarana, ny antoko’ zavatra ilaina, ary misy lafin-javatra hafa manan-danja any an-drariny vokatra.’ Ny rariny dia ny manjaka tondrozotra ny fitsarana dia mampiasa. Alimony fandoavam-bola, ny ankizy fanohanana ny adidy sy ny hafa rehetra ny fananany dia ho raisina. Na dia tsy azo tsapain-tanana ny fandraisana anjara toy ny vady ao an-trano fandraisana anjara amin’ny tokantrano dia ho raisina ho tantara, na ny vady dia mitondra ny lohateny hoe na inona na inona ny anarany na tsia. Vady izay efa nanao ny tsy azo tsapain-tanana ny fandraisana anjara dia mety hitaky an-drariny liana amin’ny mpivady fananana amin’ny fisaraham-panambadiana. Ny Fanamiana ny Fanambadiana sy ny fisaraham-Panambadiana Asa § (UMDA §) ihany koa mamela ny drariny ny fizarana ny fananana sy ny lisitra ny lafin-javatra ny fitsarana tokony diniho, ohatra: ‘ny faharetan’ny fanambadiana, ary talohan’ny fanambadiana na antoko, antenuptial fifanarahana ny antoko izay dia toy ny prenuptial fifanarahana na premarital fifanarahana, ny taona, ny fahasalamana, ny fiantsonana, ny asa, ny vola sy ny loharanom-bola, asa amin’ny fahaiza-manao, employability, estate, lafy ratsiny, ary mila ny tsirairay ny antoko, ponja vatsy.’ etc.
Ara-panambadiana fitondran-tena tsy amin’ny antony ny fanapahan-kevitra dingana
Drariny ny fitsinjarana dia tsy mitovy mitovy ny fizarana. Ohatra, tamin ‘ny fandravana ny amin’ny fanambadiana izay ny vadiny nanompo ho toy ny stay-at-trano reny fa mitana ampahany amin’ ny fanambadiana, ny fitsarana dia mety loka ny vadiny bebe kokoa mihoatra noho ny ny anjara fananana zaraina toy mialoha onitra ho azy izy io, mila miverina ny hery miasa eo ambany karama noho izy dia efa afaka mandidy efa nandany ny fotoana fampandrosoana outside-the-trano ny asa efa fa tsy miasa ao anatiny an-trano
FREE TOROHEVITRA ARAKA NY LALÀNA